Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Tattoo တက်တူး
ကျွန်တော်တို့ အရပ်အခေါ် စက်တံရောဂါနဲ့ မှင်ရောဂါအကြောင်းလေး သိချင်ပါတယ်ဆရာ။ ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေကြား ရှင်းလင်းပေးစေချက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဆောရီး။ ဒီအသုံးတွေက တနေရာတမျိုး။ ဖြစ်နေ-ခံစားနေရတာကို ပြောပါ။ ဒါလဲမှန်းဆရမှာဘဲ။ မနှစ်လောက်က မှင်အကြောင်း တယောက်လဲမေးလို့ မှန်းဖြေခဲ့ဘူးသေးတယ်။
ကျနော်က (့) ဆေးတက္ကသိုလ် (့) နှစ်ကပါ။ မွန်ပြည်နယ်က အဒေါ်ကြီး၊ အမကြီးတွေ ပြောနေတဲ့ရောဂါ၊ သူတို့အခေါ် ''မှင်'' တဲ့။ အဒေါ်-အမေ-အမျိုးတွေမှာ အဲ့ဒီ မှင် ဖြစ်နေတယ် ဆိုတဲ့စကားက ခဏခဏ ကြားနေရတယ်။ သူတို့က အဲ့ဒီ မှင် ဆိုတာကို လက်ဖမိုး နေရာတွေကို မှင်ထိုးတဲ့ ကြေးချွန်နဲ့ ထိုးကြတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက မြင်ဖူးတာပါ။ လက်ဖဝါး ခြေဖဝါးတွေမှာ ယောင်လာတယ်။ အဲ့ဒါတွေက နေရာ ရွှေ့နေတယ်။ တခါခါ ကျောထိပါ ရောက်တယ် ပြောတယ်။ အရပ်ထဲမှာတော့ မှင် ဗိုက်ထဲ ရောက်ရင် သေတယ်လို့လဲ ပြောနေကြတယ်။ (့) မှာ ရောက်နေတဲ့ ညီမကပါ သူမှင်ဖြစ်နေတယ်လို့ ဖုန်းနဲ့ ပြောလာတယ်။ ဆရာဝန်နဲ့ ပြကြည့်ပေါ့ဆိုတော့ ဆရာဝန်က Gout လို့ ပြောတယ်တဲ့။ အဲ့ဒီ မှင်နဲ့ ပက်သက်ပြီး ဆရာဝန်ပေါက်တွေအတွက်နဲ့ ပြီးတော့ အများလဲ ဗဟုသုတ ရအောင် ရေးပေးပါ။
“မင်” ဆိုတာ “မှင်” လို့ အသံထွက်ရတယ်၊ အဓိပ္ပါယ်က “ရေးခြစ်၊ ပုံနှိပ်၊ ထိုးနှံရာတွင် သုံးသော အရောင်ရှိ အရည်၊ အစေး” လို့ မြန်မာအဘိဓာန်က ဆိုပါတယ်။ “မင်ကြောင်” ဆိုတာ “မှင်ဂျောင်” လို့ အသံထွက်ရတယ်၊ အဓိပ္ပါယ်က “စုတ်ဖြင့် မင်တို့၍ ကိုယ်ခန္ဓာတွင် ထိုးနှံထားသည့် အရုပ်၊ စာလုံး စသည်” လို့ပါတယ်။
အမှန်က Tattoo သာ ဖြစ်ပါမယ်။ Indelible ink ဖျက်မရတဲ့ မင်နဲ့ အရေပြားရဲ့ Dermis layer (ဒါးမစ်) အလွှာမှာ ရေးထိုးရပါတယ်။ ထိုးကွင်း-မင်ကြောင် ထိုးကြတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် အမျိုးမျိုးရှိတယ်။
1. Decorative အဆင်တန်းဆာ၊
2. Spiritual uses အစွမ်းတန်ခိုး မျှော်ကိုးလို့၊
3. Identification သတ်သတ်မှတ်မှတ် ဖြစ်စေဘို့၊ (Nazi concentration camp နာဇီ အကျဉ်းစခန်း)၊
4. Cosmetic လှချင်ပချင်လို့၊ (Permanent makeup ရာသက်အန် မိတ်ကပ်)၊
5. Medical ဆေးသုံး၊ (ခေတ်သုံး = ဓါတ်ကင်ရာ၊ ရှေးသုံး = မြေရှိုး-မိုးပျံအစွမ်း)၊
6. Fraternal/Social အုပ်စု-အသင်းဝင် သတ်မှတ်ချက်၊ (Brotherhood, Secret society အသင်းဝင်)။
Tattooing လုပ်ရတယ်ဆိုတာ Pigment မင် (ဆေးရည်) ကို Epidermis (အပီဒါးမစ်) အောက်မှာရှိတဲ့ (တစ်ရှူး) ထဲ ရောက်စေရတယ်။ Foreign material ကိုယ့်ပစ္စည်းမဟုတ်တဲ့ တစိမ်းသက်သက်သာ ဖြစ်လို့ သူ့ဆီကို Immune system ရောဂါပြီးစနစ်ထဲက Phagocytes (ဖေဂိုဆိုက်) တွေကနေ ဝိုင်းအုံလာကြမယ်။ အနာကျက်လာချိန်မှာ ပျက်စီးသွားတဲ့ (အပီဒါးမစ်) တွေ ကွာကျမယ်။ သူ့မျက်နှာပြင်က မင်တွေ ပါသွားမယ်။ အတွင်းထဲမှာ Granulation tissue အသားနု တက်လာပြီး၊ Connective tissue တွယ်ဆက်-တစ်ရှူးတွေ ဖြစ်လာစေတယ်။
အဲဒီအခါ အပေါ်လွှာ Upper dermis က ပြောင်းလဲသွားပြီ ဖြစ်တယ်။ Pigment တွေဟာ Fibroblasts (ဖိုက်ဘရိုဘလပ်စ်) တွေထဲမှာ ပိတ်မိနေသလို ဖြစ်နေတယ်။ အစမှာ Stable တည်ငြိမ်နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရေရှည် ဆယ်စုနှစ်တွေ ကြာလာရင် Pigment ဆေးတွေဟာ Deeper into the dermis နက်တဲ့ အတွင်းလွှာထဲကို Migrate ကူးဝင်လာနိုင်တယ်။
Health risks ကျန်းမာရေး-အန္တရာယ် ဘာတွေ ရှိသလဲ။
• Infection ရောဂါဝင်တာ၊
• Allergic reactions မတည့်တာတွေ ရနိုင်တယ်။
• Single-use items တခါသုံး သုံးတာ မဟုတ်ရင်၊ Sterilization ပိုးသန့်နည်းသုံးတာ မလုပ်ရင် ဆိုးဝါးတာတွေ ဖြစ်စေမယ်။
• ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ ကူးစက်ရောဂါ စာရင်းထဲမှာ Surface infections of the skin အရေပြားနာ၊ Herpes simplex ရေယုံ၊ Tetanus မေးခိုင်၊ Fungus မှို၊ Hepatitis အသဲရောင်၊ Tuberculosis တီဘီ နဲ့ HIV တွေ ပါတယ်။
• Tattooists ထိုးပေးသူတွေဟာ Blood-borne pathogen training သင်တန်းတက်ထားသူ ဖြစ်ရမယ်။
• MRI ရိုက်တဲ့အခါမှာ Tattoo pigments တွေနဲ့ Interaction ရှိတာ တွေ့လာရတယ်။ မင်ထဲမှာ Metal particles သတ္တုတွေ ပါလို့ အရုပ်ထင်တာမှာ လာပြီး ပြဿနာဖြစ်တယ်။ မင်ထဲမှာ Iron oxide ပါတာများရင် သိသာတယ်။
မေးတာထဲမှာ ပါတာမျိုးက သူများဆီမှာ Five dots tattoo ဆိုတဲ့ အစက် ၅ စက်ကို လက်ဖမိုး လက်မနဲ့ လက်ညှိုးကြား ထိုးတာမျိုးနဲ့ ဆင်တယ်။ Quincunx ခေါ်တဲ့ အံစာတုံးက အစက် ၅ စက်လိုမျိုး ထိုးတယ်။ လေးစက်က စတုရန်းပုံ၊ တခုက အလယ်မှာ ရှိတယ်။ ယဉ်ကျေးမှု တမျိုးနဲ့တမျိုး အယူအဆ မတူကြဘူး။ “ချစ်တဲ့သူ ကိုဆံရှည် ရောင်ကြီးဗွေ။ ဒူးပေါင်ရိုး အရင်းမှာလေ၊ ထိုးကွင်းနဲ့ အလှသားအေ” သီချင်းကို ဆရာရွှေပြည်အေး ရေးခဲ့ဘူးတယ်။ မကြာသေးခင်က မြန်မာတွေရဲ့ ရှေးဓလေ့ ထိုးကွင်း အကြောင်း ဆောင်းပါးရေးတဲ့သူက ဆရာဝန်တဦး ဖြစ်ပါတယ်။